किन बोलाइयो नेपालमा विहिबार ९ः३० बजे सुरक्षा परिषद बैंठक ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » किन बोलाइयो नेपालमा विहिबार ९ः३० बजे सुरक्षा परिषद बैंठक ?
किन बोलाइयो नेपालमा विहिबार ९ः३० बजे सुरक्षा परिषद बैंठक ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहीबार बिहान ९ः३० बजेका लागि सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउनुभएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण सुरक्षा परिषद्को बैठकलाई समेत आशंकाका नजरले हेरिएपनि प्रधाामन्त्री कार्यालयले भने नियमित बैठक भएको जानकारी दिएको छ ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सहभागिता रहने बताइएको छ । नेपाली सेना परिचालन वा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।